Distric, Township News & Activities | NLD | Page 7
ကချင်ပြည်နယ်၊ ရွှေကူမြို့နယ်၊ ရေလဲကျေးရွာ မိဘပြည်သူများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: September 23, 2017 In: Distric, Township News & ActivitiesNo Comments
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ ရွှေကူမြို့နယ် ဧရာဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတွင်ရှိသော ရေလဲကျေးရွာ မိဘပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာ၂၂ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရေလဲကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျော...	Read more
ပဲခူးမြို့တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားသော နိုင်ငံတော်အခြေပြုမိန့်ခွန်းကို အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်သူများ သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆိုထောက်ခံ အားပေးကြည့်ရှု
Posted By: mygate wayon: September 19, 2017 In: Distric, Township News & ActivitiesNo Comments
ပဲခူးမြို့တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော နိုင်ငံတော်အခြေပြုမိန့်ခွန်းကို ပဲခူးမြို့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသ...	Read more
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်မှဦးဆောင်၍ ဒေါ်ခင်ကြည်အမျိုးသမီးဆေးရုံတွင် စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်
Posted By: mygate wayon: September 18, 2017 In: Distric, Township News & ActivitiesNo Comments
၁၅.၉.၂၀၁၇ခုနှစ် (သောကြာနေ့) နံနက်(၇)နာရီအချိန်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်မှ ဦးဆောင်၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချို(၂)ရပ်က...	Read more
အောင်ပန်းမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးခန်းသစ်ဖွင့်
Posted By: mygate wayon: September 12, 2017 In: Distric, Township News & ActivitiesNo Comments
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးခန်းသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာမွန်လမ်းရှိ ရုံးခန်းသစ်မြေနေရာ အဆောက်အဥ...	Read more
Posted By: mygate wayon: September 11, 2017 In: Distric, Township News & ActivitiesNo Comments
၉.၉.၂၀၁၇ ခုနှစ် (စနေနေ့) နံနက်(၁၀)နာရီ အချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ခရိုင်သတင်းပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံနှင့် တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်...	Read more
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနောက်ပိုင်းခရိုင်မှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကျောက်တံတားမြို့နယ်သို့ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းပို့ချ
9.9.2017 အမျိုးသားဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ်​​ကျောက်​တံတားမြို့နယ်​ ရပ်​​ကျေးအလုပ်​အမှု​ဆောင်​များအား ရုံးလုပ်​ငန်းဆိုင်​ရာ သင်​တန်းကို​အမျိုးသားဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ်​ အ​နောက်​ပိုင်းခရိုင်​မှလာ...	Read more
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စုံညီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: September 08, 2017 In: Distric, Township News & ActivitiesNo Comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တိုင်း၊ခရိုင်၊ မြို့နယ်စုံညီအစည်းအဝေးအား ၈.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	Read more
Posted By: mygate wayon: September 06, 2017 In: Distric, Township News & ActivitiesNo Comments
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းပြည်ထောင် စုလွှတ်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀)ဖြင့်လုပ်ဆောင်မည့်ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာရှိလုပ်ငန်းများအား စက်တင်...	Read more
နေပြည်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အလုပ်အမှုဆောင်များ လစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: September 04, 2017 In: Distric, Township News & ActivitiesNo Comments
2-9-2017 ရက်နေ့ နေ့လည်(၁:၃၀)နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင်များ...	Read more
Mr.Bill Richardson နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Posted By: mygate wayon: September 01, 2017 In: Distric, Township News & ActivitiesNo Comments
Zawgyi Version နေပြည်တော်၊ ၂၉.၈.၂၀၁၇၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်စိုးနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု The Richardson Center ဥက္ကဋ္ဌ၊ နယူးမက္ကဆီကို ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ေ...	Read more
Dwave Journal, Vol-8, No-33, 2.9.2019
Dwave Journal, Vol.(8), No.(31), 19.8.19
Dwave Journal, Vol(8), No (30), 12.8.2019
Dwave Journal Vol-8, No-28, 29.7.19
Dwave Journal, Vol-8, No-27, 22.7.19